Izinzuzo zonyaka we-Gap emva kweSikolo esiphakeme
Izinzuzo zonyaka we-Gap
Kutheni ikholeji ngqo emva kokuba isikolo esiphakamileyo singenakuba yinto efanelekileyo kakhulu yengane yakho
Ukuqhubela phambili kweziganeko zobomi kubonakala kukugqwesa isikolo esiphakamileyo kunye nokuya kwiikholeji, kodwa oku akunako ukusebenza kubo bonke abafundi. Abanye banokukhetha ukukhetha enye ikholeji, kunokuya kwiikholeji. Abanye banokuba nomnqweno wokuqhubeka nemfundo yabo esemthethweni, kodwa bafuna ukuthatha unyaka ngaphambi kokuba benze njalo. Eli xesha livame ukubizwa ngokuba ngumnyaka wegap.
Nangona kunokukwenza abanye abazali bangaxhamli, kukho ezininzi iingeniso zokuvumela umntwana wakho isikhala phakathi kokugqweswa kwesikolo esiphakeme kunye nokubhaliswa kweekholeji .
Funda malunga neendlela zonyaka we-gap onokuba luncedo kumntwana wakho.
Ivumela Ubunikazi beMfundo yabo
Enye yeenzuzo ezinkulu zonyaka we-gap kukuba ivumela abantu abadala ukuba bafumane ixesha kunye nendawo abayidingayo ukuba bathathe ubunini bootitshala babo. Uninzi lwentsha luhamba esikolweni esiphakeme kunye nethemba lokuba baya kufaka ikholeji ekupheleni kokugqiba. Eyona nto, bahlala kuloo mzila ngenxa yokuba yilokho kulindeleke kubo.
Nangona kunjalo, ngamaxesha amaninzi kuloo meko, intsha ifika kwi-campus ayilungele iikholeji kwaye inomdla ngakumbi kwimpilo kunokuzifundo. Bajonge phambili ukuhlala kude nekhaya kwaye banandipha inkululeko. Akukho nto ephosakeleyo ngokuxhamla malunga nezo nkalo zobomi bekholeji, kodwa abafundi abathile banokuvumela abafundi ukuba bathathe isithuba esilandelayo.
Nangona kunjalo, abantu abadala abasuse esikolweni baye bahlala bekholeji kuba baqonda iingenelo zabo zokwenza njalo.
Umntu omdala osemsebenzini ongena emsebenzini emva kokugqweswa kwesikolo esikolweni esiphakamileyo, unokungena kwiinyanga ezili-40 neye-60 iiyure zomsebenzi ngaphambi kokuba anqume ukuba uya kusebenza nzima, ufuna ukufumana imfundo enze into ayithandayo.
Ngenxa yokuba uye wabona izibonelelo zomntu wekholeji, wenza isigqibo sokuba athathe ubunini bemfundo yakhe kwaye uzimisele ngakumbi emsebenzini ochaphazelekayo kunokuba wayekude ukuba uye waya ngqo ekolishi ngenxa yokuba wayekulindelwe kuye .
Ukubonisa imisebenzi yabo Iinjongo kunye neenjongo
Enye inzuzo yonyaka we-gap kukuba inika intsha ithuba lokuba lifumane iziphumo kunye neenjongo zabo zomsebenzi. Abaninzi abafundi abaphumelele esikolweni esiphakamileyo ngaphandle komfanekiso ocacileyo wobugcisa abanokuwufuna. Ukuntuleka kokhokelo kunokubangela ukuguqula izikhundla kunye nokuthatha iiklasi ukuba abanakho ekugqibeleni badinga ukufikelela kwisikolo sabo.
Unyaka wegap ungasetyenziselwa ukuzithandela, ukungena ngaphakathi, okanye ukwenza umsebenzi wokungena kwinqanaba enkundleni apho abantwana bacinga ukuba bangathanda ukusebenza, banikeze umfanekiso ochanekileyo wendlela intsimi iquka ngayo.
Ukufumana Imali Yekholeji
Nangona kukho iindlela zokuncedisa ngemali kunye neengxowa-mali , abafundi abaninzi banokuba noxanduva lwenxalenye ethile yeendleko zabo zekholeji. Umnyaka wegap unike ithuba lokuba intsha ifumane imali yokuhlawula iindleko zekholejini kunye nokuphepha iikholeji zemali. Ukugqweswa kwetyala-free free kungenza unyaka wegebe ufanele ixesha elifanelekileyo.
Ukuhamba kwaye ubone ihlabathi
Unyaka we-gap unokunika ithuba lokuba abantu abadala bahambe. Ukuthatha ixesha lokuzicwilisa ngokwakho kwimihlaba yamanye amazwe (okanye nakweminye imimandla yelizwe lakwawo) kunokubonelela ngamava obomi obalulekileyo kunye nokuqonda okukhulu kwehlabathi lethu nabantu balo.
Unyaka we-gap unokuvumela ixesha elidala lomntu ukuba lihambe ngaphambi kokuba uxanduva lomsebenzi kunye nentsapho lwenze ukwenza kubi kakhulu kwaye kunzima ukucwangcisa.
Yiba ngakumbi Ulungele iKholeji
Abanye abatsha bangadinga unyaka owongezelelweyo ukuba balungiselele ngokupheleleyo kwiikholeji. Iziganeko ezinjengokugula okanye intsapho yentlekele inokubangela ukuba umntwana usele emva kwezemfundo. Abafundi abaneengxaki zokufunda bangadinga ixesha elithile lokugqiba izifundo zabo eziphakamileyo. Kwala bantwana, unyaka we-gap ungaphathwa kangangoko unyaka wesihlanu wesikolo esiphakamileyo, kodwa ngaphandle kokuqhuba umthwalo opheleleyo wekhosi.
Nangona umfundi esebenza kwiikhosi zokugqiba ingxelo yakhe yesikolo esiphakamileyo , ishedyuli yakhe inokumvumela ixesha elide ukuba atyalwe kwamanye amava e-gap, njengokusebenza, ukuzithandela okanye ukuhamba.
Ngokubanzi, unyaka we-gap uyindlela enhle kakhulu yokuvumela abafundi ithuba lokuba bachaze iinjongo zabo okanye bafumane amava okuphila ukuze balungele kangcono ukungena kwikholeji ngenjongo kunye nenjongo.
Incwadi Yam Inkumbulo
IiNkcazelo zeNdlu zeHomeschool That Even Homeschool Parents Believe
Kufuneka-Funda iincwadi zeekhaya zasekhaya
Isiqalo esisiSebenzi esisiseko IsiNgesi Ukubulisa
Iinkolelo zamaKrestu kunye neZenzo zeSayensi zeNzululwazi
Funda i-Conjugations ye "Prevenir" (Ukumxwayisa) ngesiFrentshi
Indlela uSherman kaMatshi ayelele ngayo ekupheleni kweMfazwe yoLuntu
Iikholeji neeYunivesithi e-Chicago
33 Jedi Izifundo zokuPhila
I-Dinosaurs kunye Nezilwanyana Zokuqala ZaseNew Hampshire